Wed, Aug 15, 2018 | 13:18:19 NST
झन्डै डेढवर्ष अघि एकदिन मित्र एकराज चौधरीले कुरा चुहाउनु भयो, 'मैले नेपालको संविधान थारु भाषामा उल्था गर्ने विचार गरे।' एकजना रेडियोकर्मी जसलाई म जहिले भेट्थे बिहानदेखि बेलुकासम्म रेडियो स्टेशनमै व्यस्त रहेको पाउँथे । त्यसैले मैले चौधरीको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिइन ।
महिला हिंसा कम गर्ने अभियानमा लागेका पुरुष
सेतो कुर्ता र धोती । काँधमा सेतै गम्छा । निधारमा ठाडो रातो टीका । टाउकोमा लामो टुप्पी, शिखा पारिएको । सिरहाको मझौराका गोविन्द यादव । देख्दा लागेको थियो, यी व्यक्ति गाउँको पूजारी वा धार्मिक अगुवा हुनुपर्छ । वा धर्म तथा परम्पराको नाममा बाँधिएको पात्र ।
गाडी दुर्घटना कतै नहोस्, कहिले नहोस् । अप्रिय समाचार कहिले लेख्न नपरोस् । तर, यस्तो कामना गरेर मात्र नहुने । बेलाबेला दुर्घटना भइ नै रहेको हुन्छ । दुर्घटनापछि सामाचार त दिनै पर्‍यो । यो त पेशागत धर्म हो ।
गौरी लंकेश मारिएकी होइनन्, समाजको संवेदना र करुणा मरेको हो !
गौरी लंकेश एक्लै मारिएकी होइनन् । सँगसँगै मारियो हाम्रो समाज पनि । समाजको संवेदना, करुण सबै सँगसँगै मर्‍यो । सक्नुहुन्न निन्दा नगर्नुहोस् तर नाच्न त बन्द गर्नुहोस् । यति त तपाईँ आमाहरु आफ्ना छोराछोरीलाई भन्न सक्नुहुन्छ नि !
अलिकति, प्रसङ्गलाई बसाईँसराईँतिर लगेर सामिप्यता र कनेक्टिभिटी हेराैँ ? धेरै साथीहरुले प्रश्न उठाइरहनुभएको छ, धेरै मान्छे पहाडबाट तराई, आसाम बर्मातिर बसाईँसराईँ गरे । तर के थियो त कारण तराईका मान्छे पहाड बसाईँसराईँ गएनन् । यो प्रश्न गरिबीको साथै सामिप्यता र कनेक्टिभिटीसँग जोडिएर आउँछ ।
सामिप्यताको अर्थ सामान्य भाषामा नजिकै, छेउमै वा कतै नजिकै नै हो । पुनः प्रश्न उठ्छ कि के हो नजिकै वा छेउमै भनेको ? तर यहाँ भौगोलिक दूरी आउँदछ, कति दूरीमा, साथीहरुको आफ्नै सर्कलमा, आफ्नै परिवार भित्र कति नजिक, संस्था भित्र, पेसा भित्रको दूरीले पनि सामिप्यता नापिन्छ ।
हामी दुई दिदी बहिनी कसैलाई कुट्न लागे झैँ हातमा लौरो लिएर उभियौँ र लौरोले बिस्तारै एउटा एउटा जुत्ता र्‍याकबाट खसाल्न थाल्यौँ । आधा जति जुत्ता भुईँमा झारेपछि सर्प सलल पानीका बोतल राखेतिर गयो ।
सर्पले टोकेको ठाउँमाथि बाँध्न हुन्छ कि हुँदैन ?
सर्पले टोक्ने बित्तिकै लौ खत्तम भयो भनेर डराउन हुँदैन । धेरै सर्पदंशका बिरामीमा यो साझा समस्या हुन्छ कि सर्पले टोक्यो कि अब केही हुन्छ भनेर आत्तिने । सर्प र सर्पको टोकाइको तरीकाले विष लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने निक्र्यौल गर्छ ।
सिंहदरबार पस्ने बित्तिकै भारत भ्रमण गर्ने विगतको परम्परालाई पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि दिल्लीमा भेटवार्ता र घुमफिर भ्याउनुभएको छ ।
नियात्रा : सेल्फी डाँडो र सिन्धुली गढी
घरी उघ्रिने, उत्तिखेरै धुम्मिने, भरै नहुने मौसम । चिसो बताससँगै छोएर भाग्ने बादलको टुक्रा । कुहिरोले छोप्दै, छोड्दै गर्ने बस्तीको दृश्य । पुग्नेलाई लोभ्याउने । अनि हेर्दैजाँदा मनै कुँड्उयाउने, सिन्धुली गढी ।
​ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रोगको महामारी देखिँदैछ, यसरी सजगता अपनाऔं
विश्वमा प्राकृतिक प्रकोप पछि सधै स्वास्थ महामारी हुने गरेको देखिन्छ । र त्यसको सम्भावना उच्च हुने गर्छ । अहिले दैनिक जसो बाढी पहिरो गएका ठाउँबाट झाडापखाला, श्वासप्रश्वास र ज्वरोका बिरामी बढिरहेको भन्ने समाचार आइरहेका छन् ।
गर्मी याममा शरीरमा पसिना आउनु नराम्रो कुरा होइन । यसले शरीरलाई शान्त राख्न तथा शरीरको तापक्रम घटाउन मद्दत गर्छ । एक हिसाबले शरीर संरक्षणको लागि सुरक्षात्मक संयन्त्र पनि हो । पसिना आयो भने शरीरलाई शितल हुन्छ, तर धेरै पसिना आयो भने रोग लाग्छ ।
बाढी र पहिरोको कारण देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । विशेषरी नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन कष्टकर छ । बाढीले तराईका सयौँ घर डुबानमा परेका छन् ।
​विराटनगरमा त जहाजै डुब्न लाग्यो, तराईलाई तागत देउ सरकार
साउन महिना सकिनै लागेको बेला मनसुन सक्रिय भएपछि देशभर बाढी पहिरोले बितण्डा मच्चाएको छ । तराईका धेरैजसो ठाउँ जलमग्न भएका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, रौतहट, दाङ, बाँके, बर्दिया लगायत जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ ।
गाई छोडेका पशुपतिलाई कति मिल्ला पापा, थाहा पत्तो नपाउनेको थर मात्रै थापा !
नामै पशुपति । पशुपतिलाई मन पर्ने आफ्नै साँढे । साँढेलाई सुहाउने हलो । पशुपतिको भलो गर्ने पनि त्यही हलो । हलो मात्रै रोजेर हेलो हेलो भन्दै अघि लाग्नुपर्छ भनेर बेलैमा थाहा पाएको भए नामै कमल भएका मान्छेसित पशुपति यति बिघ्न कठोर किन हुनुपर्थ्यो ।
सडकका खाल्डामा परेर कति मान्छे मरेपछि शहर स्मार्ट हुन्छ ?
स्मार्ट सिटी र रेलका कुरा छोड्नुस्, पहिले खाल्डाका कुरा गर्नुस् । सडकलाई सडक भन्न मिल्ने बनाउनुहोस् । हिँड्दा हिँड्दै खाल्डोमा हामी नपर्ने सडक बनाउनुहोस् । अनि गरौँला स्मार्ट सिटीका कुरा, स्काई रेलका कुरा, अनि मेट्रो रेलका कुरा ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था लघुवित्त संस्था हो । लघुवित्त संस्थाले गरिबि न्युनीकरणमा ठूलो भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्त सम्म ५३ लघुवित्त संस्थालाई अनुमति दिएको छ ।
​घरमा दुहुना नभए पनि थालभरी खिर !
बल्लतल्ल मकैले चमरा काढ्यो, सुत्ला पनि च्याप्यो । अनि असारको मध्यतिरबाट हामी केटाकेटी गुनगुनाउन थाल्थ्यौं– ‘असारमा खाने दुधिला मकै साउनमा खाने खिर...!’ सुन्दैमा मुख मीठो हुने ।
स्वाईन फ्लु शंका लाग्यो ? के गर्ने ?
केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा स्वाईन फ्लु देखिएको छ । गएको असार मध्यतिर नै शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा यो सिजनको पहिलो स्वाईन फ्लु देखा परेको हो । यसलाई इनफ्लुन्जा ए ‘एच वन ए वान’ प्यानडेमिक २००९ भनिने गरिन्छ ।
पशुपति आर्यघाटको ब्रम्हनालमा लमतन्न सुताइएको छ गुरुको शव । अघिल्लो दिन दिउँसोसम्म बाँच्लान कि भन्ने आशा थियो साथीहरुलाई । के के उपाय गर्दा हुन्छ सबै गर्ने, के कति खर्च लाग्छ, सबै मिलेर जुटाउने भन्ने सल्लाहले साथीहरुको दौडधुप रोकिएको थियो ।
मलाई सानै उमेरदेखि समाज सेवा गर्ने मन थियो । मेरो ममी बितेको एक वर्ष मात्रै भयो । ममीले सुसाइड गरेपछि मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएकी थिएँ । ममीको मृत्युपछि म १७ दिनसम्म मेन्टल अस्पताल बसेँ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाएको कदम
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँ बढी नगद कारोबार रोकेका छन् । तपाईंले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम झिक्न खोज्नु भयो भने बैंकले दिँदैनन् र १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जम्मा गर्न लैजानु भयो भने पनि बैंकले लिँदैनन् ।
दाँत खप्टिएर किन आउँछ ?
डा. रमेश बिछ्छा – गुलियो बालबालिकालाई सार्‍है मन पर्ने खानेकुरा । चकलेट, मिठाई पाएपछि बालबालिका त्यसै दंग पर्छन् । तर गुलियो खानेकुरा खाँदा दाँतमा टासिन्छन् । मुखमा भएको ब्याक्टेरियाले त्यहाँ एसिड अर्थात् अम्ल उत्पादन गर्छ र दाँतलाई खियाउने गर्छ । यसले गदाँ खाएको खाना दाँतमा अड्कने र क्याबिटी उत्पादन हुन्छ र दाँतमा किरा लाग्छ । यस्तो समस्या नियमित दाँत नमाझ्दा हुने गर्दछ । दाँतमा किरा आजको भोलि नै लाग्ने कुरा होइन, दाँतको बिचमा खाना अड्किन थाल्यो भने आफैले पनि किरा लाग्ने सम्भा...
​काठमाडौंका मेयरलाई प्रश्न - यो भिडियो हेर्नुभयो ?
पिसाब आएको जस्तो हुन्छ, कहाँ गर्ने भनेर ठाउँ खोज्दै गर्दा पिसाब चुहिहाल्छ, खोक्दा, हाछ्यु गर्दा, बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठ्दा पिसाब चुहिन्छ । अझै धेरै बिरामीले समस्याको बारेमा ‘डाक्टरसाब हाँस्दा खेरी लाजै हुन्छ’ भन्ने गर्छन् । यस्तो समस्या विवाहित, अविवाहित तथा वृद्ध सबै खालका महिलालाई हुन्छ ।
म पत्रकारिताको विद्यार्थी । पत्रकारिता पढ्न मैले सात वर्ष खर्चिसकेको छु । मैले सात वर्षमा सिकेका कुरालाई तिखार्ने थालेको रुपमा उज्यालो रेडियो नेटवर्क पाएको छु ।
मुसाले टोक्यो, के गर्ने ? के रेबिज रोग लाग्छ ?
मुसाले टोके स्ट्रेप्तोब्यसिलरी र स्पाईरिलम गरी दुइ प्रकारका ब्याक्टेरियाको संक्रमणको उच्च जोखिम हुन सक्छ । यी ब्याक्टेरियाहरु संक्रमित मुसाले टोके वा चिथरे मात्र पनि मानिसमा सर्न सक्छ । यसलाई समग्रमा र्याट बाइट फिवर भनेर बुझ्ने गरिन्छ ।
विप्लवको बन्दमा सरकारी कर्मचारी नै प्रहरी फन्दामा !
एक्कासी प्रहरीको दुईवटा भ्यान आइपुग्यो । भ्यानबाट प्रहरी ओर्लिए । केही हामी भएतर्फ नै आए । तर एक प्रहरी निरीक्षक हामी नजिकै रहेका व्यक्तिसँग हात मिलाउँदै भने, ‘ए पुरानै साथी पो हुनुहुँदो रहेछ, एकछिन हामीसँग गाडीमा जाउँ न ।’ ती व्यक्ति प्रहरीको भ्यानतर्फ लागे । केहीबेरको कुराकानीपछि उनलाई भ्यानमा चढाइयो ।
जब आँखै अगाडि ट्रिपरले मोटरसाइकललाई किच्न आट्यो...
आइतबार दिउँसो पौने ३ बजे ललितपुरको भनिमण्डल चोक नजिकैको चक्रपथमा गाडी सामान्य अवस्थामै चलिरहेका थिए । चर्को गर्मी, गाडीको चापले गाडी बिस्तारै पालो पर्खेर आउने जाने गरिरहेका थिए ।
गुरुपूर्णिमा र असल शिक्षक
नेपाल कैयौँ तपस्विका ज्ञानले सिञ्चित पृथ्वीतलको पुण्यभूमिको रुपमा चिनिने सुन्दर, सुरम्य शान्त देश अवस्य हो । यहाँ जन्मिएका जनक, बुद्ध, सीताजस्ता उदाहरणीय व्यक्तित्वसँग धार्मिक सहिष्णुभाव अनि मानवीय आचरण र आदर्श भावले रम्न पाएका छन् ।
विकास के लाई भन्ने ?
२१ औं शताब्दीको विकास भन्नाले गुणस्तरीय जीवनको अधिकारलाई बुझ्नु पर्दछ । मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको थप विकसित रुपमा गुणस्तरीय जीवनको अधिकार सम्वन्धिको अवधारणागत विकास भएको हो ।
२० वर्ष पछिको स्थानीय चुनाव एमालेलाई फलिफाप
चुनावको बेला केही रोचक र आश्चर्यजनक नतिजा पनि आउने गर्छ । बराबरी या एक, दुई मतान्तरले जित्नुलाई धेरैले भाग्यसँग तुलना गर्छन् । भाग्यको खेलमा पनि एमाले सफल भयो । झापाको कमल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा गोलाप्रथाबाट नेकपा एमालेकी मेनुका काफ्ले विजयी हुनु भएको छ ।
बम समात्ने हवल्दारको हाइहाई, कमाण्डर गुमनाम ?
प्रहरी सेवामा कर्तव्यनिष्ठ भएर मैले काम गरेको २२ वर्ष पुग्यो । २२ वर्षको अवधिमा धेरै आरोह अवरोह पार गरियो । यसमा मलाई गौरव नै छ । गुमाउने भन्दा पनि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेर मैले धेरै सफलता प्राप्त गरेको छु । देश र नागरिकको सेवा गर्न पाउँदा मलाई गर्व छ ।
​मृत्युको भयमा मायाको मल्हम
‘तपाईंको उपचार जत्ति सक्दो छिटो गर्नुपर्छ, नत्र...’ डाक्टर यति मात्र बोले । एक्कासी मेरो आँखा अगाडि अन्धकार छायो, दिनमै रात पर्‍यो, डर लाग्यो यत्तिका वर्षसम्म जोडी भएका हात छुट्छ कि भनेर ? त्यो भन्दा धेरै हामी दुई पाङ्ग्रा मिलेर अडाएको रथ भत्कन्छ त अब भनेर ?
शिक्षक भएका बखत ठूलो भएपछि के बन्ने भनेर सोध्यो भने मैले सोधेका धेरैजसो बच्चाको जवाफ डाक्टर, पाइलट वा इन्जिनियर हुन्थ्यो । मैले नै पनि सानामा धेरैलाई यस्तै जवाफ दिएकी हुँ ।
बिर्सन खोज्दा पनि मस्तिकमा अझै त्यही पहिरो आउँछ । जहाँ बिहीबार मध्यराति दुईजना प्रहरीले ज्यान गुमाए । दुईजना अझै वेपत्ता छन् । तर मृत्युको मुखबाट हामी उम्कन सफल भएका छौं ।